“Memphis Depay ma ahan sida Messi ama Ronaldo” – Van Gaal oo ka hadlay wararka Depay la xiriirnaya Barcelona – Gool FM
Dajiye September 11, 2020
(Yurub) 11 Sebt 2020. Tababaraha reer Holland ee Louis van Gaal ayaa ka hadlay wararka Memphis Depay la xiriirnaya Barcelona, wuxuuna tilmaamay in weeraryahanka kooxda Lyon uu ku dhibtoon doono haddii uu ku biiro naadiga reer Catalonia xagaagan.
Louis van Gaal ayaa wareysi uu ku bixiyay warsidaha “Tutto Mercato” wuxuu kaga hadlay arrinta ku saabsan in Memphis Depay uu ku biirayo kooxda Barcelona xagaagan wuxuuna yiri:
“Waxaa jirta calaamatu su’aal, Depay waa ciyaaryahan xiise leh, gaar ahaan marka uu helo xuriyad uu ku ciyaaro”.
“Laakiin waa inaan ka fikirnaa sidii aan ula qabsan lahayn dhaqanka cusub iyo kooxda cusub”.
“Sanadka ugu horeeya had iyo jeer waa kan ugu adag, oo fiiri wixii ku dhacay Matthijs de Ligt marka uu tagay Juventus, ama Frenkie de Jong oo Barcelona ah”.
Tababaraha, oo ay kasoo wada shaqeeyeen Memphis Depay kooxda Manchester United, ayaa sharaxaad ka bixiyay in Memphis uu leeyahay tayo, laakiin uusan aheyn sida Lionel Messi ama Cristiano Ronaldo.
Dhowr warbixin saxaafadeed ayaa dhawaanahan sheegayay in Barcelona ay heshiis shaqsi ah la gaartay Depay, isla markaana la sugayo kaliya inay heshiis wada gaaraan labada kooxood Barca iyo Lyon, maadaama ay kaliya hal sano uga hadhsan tahay dhamaadka qandaraaskiisa.
Horudhac: Fulham vs Arsenal… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ay maanta Gunners booqanayso kooxda kala dhisan London)